Ogaden News Agency (ONA) – Cabdirashid Duulane Rafle : Waa Kabaleef Dhab ah – By Cabdiqani Xassan
Cabdirashid Duulane Rafle : Waa Kabaleef Dhab ah – By Cabdiqani Xassan
Wax la filan karo ma’ahayn in qof Somali ah oo waliba u dhashay Ogadenya uu amaanta uu Cabdirashid Duulane ka qoray dhiigyacabkii Meles ee shabakadaha u hadlaya Wayaanaha/Itobiya ay soo dhajiyeen. Maqaalkaa oo cinwaanka uu u doortay ahaa; Aragtidii Meles oo noqotay Aragtida Dadweynaha (Meles’ Vision thrives as the Peoples’ Vision), ayuusan Cabdirashid Duulane la hadhin erey amaan ah oo maskaxdiisa uu ka heli karay. Waxaa maqaalkaa mantagga ah ka daba qaatay Qoraaga Cabdiqani Xassan oo maqaal si dhab ah u tusaalaynaya dhiibaatada uu u gaystay dhiigyacab Meles guud ahaan shacabka Itobiya, gaar ahaana uu u gaystay umadda Somaliyeed meel ay joogaanba.
Maqaalka Cabdiqani uu cinwaanka uga dhigay (Abdirashid Dulane Rafle: a typical sycophant) oo macnaha ugu dhow uu noqonayo; Cabdirashid Duulane Rafle : Waa Kabaleef (Sycophant تملق) Dhab ah, wuxuu sheegay inuu Cabdirashiid Duulane oo muddo madax kasoo ahaa maamulka dabadhilifka ee dalka Ogadenya ee la gumaysto uu maqaal ku qoray shabakadda aigaforum.com, isagoo ku amaanayo kaligii taliyihii dhintay ee Meles Zenawi, adeegsanayana erey kastoo amaan ahaa oo aqoontiisa Ingriiska uu ka heli karay. Wuxuu yidhi qoraaga;
Cabdirasiid Duulane oo labaatan sano u ahaa daba-dhilif TPLF wuxuu ka dhigay xukunkii argagixinta ee Meles uu ku haystay Itobiya mid ifaysa. Wuxuu ku qoray Cabdirashiid hordhaca maqaalkiisa; “Marba marka ka dambeeya ayaa waxaan ogaanaynaa xaqiiqada dhabta ah in aragtidii Meles iyo dhaxalkuu nooga tagay ay yihiin waxa dhaqaajinaya isbadalka dhaqsaha ah ee umadeena ay gaadhay iyo tobanaanka malyan ee qof ee balanta ku qaaday inay badalaan sawirka xunee laga haysto dalkeena iyo noloshooda.” Amaantaa ayuu qoraaga ku tilmaamayaa inay danaqday dhaawaca ku yaala dadweynaha ee dhiigyacabkii dhintay uu shacabka Itobiya gaadhsiiyay. Waa wax maskaxda daalinaya inuu Cabdirashid ku tilmaamo buu yidhi inuu ahaa Kaligi taliyihii dhintay Siyaasi caalami ah. Haduu Meles noolyahay amaantan waxbuu ku heli lahaa Cabbdirashiid, laakiin u gurguurashada qof dhintay maxaa ku kalifaya? Wuxuu yidhi qoraaga isagoo isku jawaabaya; Cabdirashiid wuxuu ka leeyahay kaba-leefkan hadaf siyaasi ah, waa inuu dib usoo nooleeyo raadkiisii daba-dhilifnimada oo sii baaba’aysa. Wuxuu ka raja qabaa inuu iska gado guddiga fulinta ee TPLF si jaga looga siiyo Adisababa. Wax intaa dhaafsanoo uu ka leeyahay arintan ma jirto.
Wuxuu qoraaga aad uga faalooday amaanta beenta ahee uu Cabdirashid ka badiyay Meles iyo xisbiga EPRDF oo uu leeyahay waa xisbi isku duuban oy hogaaminayaan maskax. Intaa ka dib ayuu qoraaga wuxuu si tafatiran uga hadlayaa dhibaatada uu u gaystay kaligii taliyihii bakhtiyay shacabka Somaliyeed gaar ahaan dadweynaha Ogadenya, dhibaatadaa oo dhamaan haya’adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay xaqiijiyeen. Waxaan siinayaa ayuu yidhi qoraaga waqti haduu hayo Cabdirashiid inuu la wadaago akhrista-yaasha hal hay’ad oo muctaraf ah oo erey fiican ka qortay xusuusta (the record) Meles Zenawi ee xuuqulda aadanaha. Cabdirashiid ma qarin karo buu yidhi qoraaga falalkii naxdinta lahaa ee aabihiisa siyaasadda uu sameeyay.
Waxaa layaab leh buu yidhi qoraaga inuusan Cabdirashiid intaa ku joojinin beentuu sheegahayay. Wuxuu ydhi; ” Maanta Itobiya waa nabad dhexdeeda iyo dariskeedaba, waxayna noqotay horyaalka nabadda ee gobolka, qaaradda iyo caalamkaba.” Wuxuu intaa raacinayaa; “Ciidanakanaga Itobiya ee Xirafadda iyo disbiliinka sareeya leh waxay si hagar la’aan ah uga hawlgaleen Ruwanda, Brundi iyoLiberiaiyagoo ah Ciidanka nabad Ilaalinta ee QM, waxay hadana ka hawlgalayaan hagar la’aan Sudan/Koonfurta Sudaan iyo Somaliya. Hawlaha ay qabtaan waxay usoo jiiday amaan badan iyo ixtiraam ay u jeediyeen dadweynaha dalalka ay ka hawlgalaan iyo bulshada caalamkaba.”
Wuxuu qoraaga aad ula yaabay beenta intaa la’eg ee Cabdirashiid uu qorayo, iyadoo buu yidhi qarnigan aan ku jirno ay adagtahay inuu qofna ixtikaaro runta oo qariyo, ayuu Cabdirashiid Duulane wuxuu soo qoray amaantay qori jireen kaadirika EPRDF oo ah magaca qarsoon ee TPLF. Waxay ka dhigantahay beenta uu sheegay Cabdirashiid isdiidsiinta (Denialism) xaqiiqada jirta, sababtoo ah buu yidhi qoraaga Itobiya dhexdeeda in aanay nabad ka jirin oo dhamaan qawmiyadaha Itobiya ay hubka qaateen waa lawada ogsoon yahay. Waxaa ka dagaalamaya jabhadda ONLF, Ginbot7, Gambela, Cafarta oo ka cadhooday gacan bidixaynta (iyo weliba Tigreega qaarkii). Waxaa sidoo kale mudan buu yidhi qoraaga in la sheego xasilooni-darida ay Itobiya ka wado gabi ahaan Geeska Afrika iyagoo weerary Somaliya. Meles Zenawi buu ahaa ninka bururiyay dawladii Ku-meel gaarka ahayd ee TFG iyo maxaakimtii UIC markii ku wada hadlayeen Khartuum. Wuxuu ninkii dagaalka ku qaaday Somaliya ee rajadii laga qabay inay dib u dhisanto kala tuuray ee malaayiinta Somalida ah barakicinta u gaystay. Dagaalkuu ku qaaday Somaliya iyo layntii kumanaanka Somalida ah iyo barakicintii shacabka waxay keentay inuu abuurmo uruka Al-shabaab ee argagixsada ah. Hadaba C/rashiid Duulane sidaa ha ugu fududaato inuu leefo kabaha master-kiisii.
Hadaan soo ururino ayuu yidhi qoraaga, Meles haduu noqday hogaamiye aragti dheer lahaa, Radovan Karadzic ee Serbiya ee ku caanbaxay sharka iyo xasuuqa wuxuu noqonayaa mid difaacayay Xuquuqda Aadanaha, Hitler-na wuxuu noqonayaa midkii badbaadinayay Yuhuuda.